इलामका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घट्यो - इलामका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घट्यो
नेपालबहस संवाददाता २०७४, ११ माघ, 06:00:36 AM
११ माघ, काठमाडौं । हिउँदयाम लागेसँगै खोलानालामा पानीको बहाव घट्दै जाँदा विद्युत् उत्पादन आधा घटेको छ ।
२०७४, ११ माघ, 06:00:36 AM
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि डा. केसी अस्पताल भर्ना
अनशन बस्न डा. केसी दोस्रो पटक इलाममा, माग पूरा नभए ४ बजेदेखि अनशन बस्ने
२४ घण्टामा ६ सय ६० वटा सवारीसाधन कारवाहीमा, सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन